Trusty Shops|Nature’s Way Vita Gummies Vitamin C + Zinc
Nature’s Way Vita Gummies Vitamin C + Zinc
Product Code: oz0246
သကြားလုံး ပျော့ဖြစ်ပြီး Vitamin C +Zinc ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခုခံအားကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကြောင့် အအေးမိ လွယ်ကူသော ကလေးငယ်များအတွက် သုံးဆောင်နိုင်သည်။
သကြားလုံးပျော့ဖြစ်ပြီး Vitamin C +Zinc ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခုခံအားကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကြောင့် အအေးမိလွယ်ကူသော ကလေးငယ်များအတွက် သုံးဆောင်နိုင်သည်။ အရောင်ဆိုးဆေးနှင့် အမွှေးနံ့သာများပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ အချိုဓာတ်မှာ သဘာဝသီးနှံများမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အအေးမိချိန်နှင့် အပူတတ်ခြင်းကိုလျင်မြန်စွာလျော့ကျစေသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ - Vitamin C ကိုဖြည့်ပေးခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်ခြင်း၊ ခန္တာကိုယ်ကြီးထွားခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း အရေအပြားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် collagen ဓာတ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Vitamin , Zinc
You're reviewing: Nature’s Way Vita Gummies Vitamin C + Zinc
Nature's Way Kids Smart ( ...
Nature's Way Kids Smart (from6months)
ကလေးများ၏ အရိုး၊ သွား များကို သန်မာစေပြီး Calcium နှင့် Vitamin D3 ကို လုံလောက်စွာ ပေးသည်။
Panadol 1 month -2years ...
Nature's Way Vita Gummies Blue Light Eye Defense
ကလေးငယ်၏မျက်လုံးအား ကွန်ပြူတာနှင့်ဖုန်းတို့၏ အလင်းရောင်မှကာကွယ်ပေးသည်။
Sambucol Cold & Flu Kids
အအေးမိ တုပ်ကွေးဆို ပြန်ပျောက်ဖို့ရက်ရှည်ကြာတဲ့အခါ
Nature’s Way Vita Gummies ...
Bio Island DHA for Kids အ ...
Bio Island DHA for Kids အားဆေး
DHA သည် ဦးနှောက် အာရုံကြော စနစ်နှင့် သွေးထဲရှိ triglycerides, cholesterol ကို လျှော့ချပေးပြီး thrombosis ဖြစ်ပွားမှုကို တားမြစ်ပေးသည်။
Maxigenes Chewable Milk
မျက်စိကျန်းမာရေးနှင့် အမြင်အာရုံဒဏ်ရာရခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွ့ံဖြိုးရန် လိုအပ်သော calcium ဓာတ် စသည့်အာဟာရများကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
Bio Island Lysine Step up ...
Bio Island Lysine Step up အရပ်မြင့်အားဆေး
ဉာဏ်ပညာ ထူးချွန်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ အရပ်မြင့်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် တိုးပွားခြင်း၊ ခုခံအား ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ ရရှိမှု လျှော့ချခြင်း။
Vicks Baby Balsm Baby Car ...
Vicks Baby Balsm Baby Care
Ostelin Kid’s Vitamin D & ...
Ostelin Kid’s Vitamin D & Calcium ကလေးသုံးဗီတာမင် D + Calcium အားဆေး
ဗီတာမင်D နှင့် calcium သည် အရိုး၊ သွား နှင့် ကြွက်သားများ ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန် အတွက်ပ့ံပိုးကူညီပေးသည်။
Mustela Vitamin Barrier C ...
Mustela Vitamin Barrier Cream New Packaging
diaper ခရမ် ဘူးဒီဇိုင်းအသစ်
Nature’s Way Vita Gummies Multi-Vitamin Fussy Eater
ကလေးငယ်များ အစားမစားခြင်းနှင့် အစားရွေးခြင်း များကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကလေးငယ်များအတွက် သီးသန့်ဖော်စပ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။
NOOR VITAMIN Children's O ...
NOOR VITAMIN Children's Omega-3 EPA+DHA
Omega3fatty acid ဟာကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါပါတယ်။ယနေ့ခတ်ကေလေးတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်တဲ့ အဟာရကိုရရှိအောင်စားသုံးခြင်းမရှိပါဘူး။
Sambucol Immunity Kids Gu ...
Sambucol Immunity Kids Gummies
ကလေးတိုင်းအတွက် အအေးမိခြင်းနှင့် ရောဂါကာကွယ်ပေးပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Nature's Way Kids Smart I ...
Nature's way Probiotic ki ...
Nature's way Probiotic kids smart
အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှုများ ပိုင်းဆိုင်ဖို့ ခွန်အားပြည့်စေမည့် Probiotic Choc Balls
Ostelin Vitamin D Liquid ...
Ostelin Vitamin D Liquid Ostelin မွေးကင်းစ/ကလေးငယ်ဗီတာမင်D အားဆေး
Ostelin ၏ calcium နှင့် ဗီတာမင်-D ဆိုင်ရာ အားဆေးသည် လူကြိုက်များ၍ Australia တွင် professional ဖြစ်ပြီး calcium နှင့် ဗီတာမင်D အားဆေးမှအပ အခြားအားဆေး မထုတ်လုပ်ပါ။